Kooxdayada khubarada ayaa runtii ku siinaya macluumaad ku saabsan habka shaqo raadinta. Sida ugu fiican ee loo isticmaalo shaqaalaha ajnebiga ah. Sida xaqiiqda ah, shirkadda Dubai City waxay ka caawisay shaqaalaha ajnebiga ah ee caalamiga ah. Halkaas oo ay soo foodsaartay in ay gaari karaan labaatan kun oo shirkadood oo Bariga Dhexe.
Dhaliilayaashu waxay awoodi doonaan inay helaan shaqo. Waa in la xasuustaa in aynaan hagaagsannahay oo keliya hagaha caalamiga ah ee shaqo doonka. Shirkadda Dubai City waxay si qalad ah u siisay shaqaalaha ajnebiga ah ee dibadda ka yimid. Shaqaalaha India, kuwa koonfur afrika iyo xirfadlayaasha Pakistan. Dhinaca kale, waxaan ka caawineynaa sidii loo ogaan lahaa qofka shaqaaleysiiya bartamaha bari. Taasi waxay sababtay in kooxdayadu ay wargelinayaan musharaxi ka socda Imaaraadka Carabta. Si aad u hubiso in maamulayaasha iyo qallafsanaanta qallalan ay heleen shaqo sax ah.
Shaqaalaha raadinaya raadinta macluumaadka la qiimeeyey. Soo koobiddu waxay eegaan hoosta iyo eegaan boostada blog. Shirkada Magaalada Dubai waxay ka dhigeysaa mid suurtogal ah. Laga soo bilaabo dhammaan gogosha. Shaqaalaha Filibiin sidoo kale waxay adeegsanayaan adeegayaga guuleysta. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo dhamaan maamulayaasha. Dhab ahaan way maamuli doontaa caawimaadda. Loo shaqeeyayaasha iyo sidoo kale maamulayaasha shaqaaleynta. Qaadashada qiimaha adoo adeegsanaya adeegyadeena shirkadda. Dhinaca kale, waxaan la shaqeyneynaa xuquuqda Sharciga.
Published by Shirkadda Dubai City at October 30, 2019
Kuweyt - Muxuu mudan yahay Magaalooyinka. Magaalada Kuwait. Magaalada waa kala duwan tahay. Laga soo bilaabo meelaha wanaagsan ilaa foosha xun. Waxaa haboon in la aado hareeraha Shark Mall, halkaas oo aad ka arki karto sida kalluunka cusub ee kalluumeysiga uusan uga furneyn kuwa wax goosanaya isla markaana toos suuqa ugu aada. Kalluun, shiir, jijimooyin, sharkooyinka carruurta. Wax-aragga. Kuwa Kuweyt Kuweyd - saddexda caaradood ee caanka ah oo leh kubbado gudaha ku dhisan. Mid waa munaarad biyo, tan kale waa makhaayad kacsan (gabi ahaanba la burburiyey xiligii Saddam uu qabsaday - gudaha waxaa ku yaal sawirro muujinaya go'doominta Kuwayd), ta saddexaadna waa munaarad leh laambad, iftiinka labada kale. Way u wanaagsan tahay inaad halkaas tagto labadaba maalinta iyo habeenkii, ama aad u bogaadiso magaalada iftiinka badan. Aqalka Amiirka (labadaba jir iyo mid cusub). Dhismooyinka waxaa difaaci kara cannooyin fara badan. Astaanta Amiirka [...]
Sida loo kireeyo baabuur dibedda ah (iyo in ka badan). Tilmaanta kharashyada. Sida loo kireeyo baabuur dibedda ah (iyo in ka badan). Tilmaanta kharashyada. Buug-tilmaameedka noocan ah badankood wuxuu ku bilowdaa dhibco xayeysiis ah oo taga wax sidan oo kale ah: kiraysiga gaari fasax ah wuxuu ku siinayaa fursado badan, sababtoo ah waxaan nahay mobilo waxaanan ku wadi karnaa meel kasta oo aan rabno, marka waqtiga badbaadintu waa sarreysaa. Qoraalka soo socdaa wuxuu noqon doonaa mid aad u dheer, sidaa darteed aan iskaga daayo waxyaabahaan dhaqameed. Maadaama aad akhrinaysid ereyadan, waxaad u badan tahay inaad ogtahay in kireysiga baabuur dibedda ah ay tahay fikrad fiican waxaadna raadinaysaa oo keliya talooyin kaa caawinaya inaad si habsami leh u socoto hawsha. Marka aniga, Mr. Nightmare, anigoo ah nin inta badan kireysta baabuurta dibada, marar badan ayaan la wadaagi doonaa [...]
Lacag intee le'eg ayaan ku aadaa Kuwait? Kuweyt, sabab la’aan loo yaqaan qasnadda Gacanka Faaris, waa waddan yar oo ku yaal koonfurta-galbeed ee Aasiya, xeebta waqooyi-galbeed ee gacanka hore loo soo sheegay. Gobolku wuxuu ku raaxeystaa dalxiisayaasha wershadeeda farsamada ee sida xawliga ah u kobcaysa, taasoo u sahalisay soo bixitaanka xeebta aan dabiiciga aheyn dhamaadka qarnigii la soo dhaafay. Wadooyin leh dekedo qurux badan, maraakiib qurux badan, ama goobo fara badan oo adeegyo ah oo qof walbaa uu naftiisa ka heli doono wax laga bilaabo - saxamada asalka ah ee Kuwaiti ilaa jardiinooyinka raaxada. Safarka Kuuriyada Kuweyt runtii waa dammaanad soo jiidasho leh. Kahor safarka, si kastaba ha noqotee, midkeen kastaaba waa inuu xiiseeya mowduuca sida lacagta ah ee Kuweyt lagu hubiyo nooca lacagta ah ee loo qaado Kuwait? Lacag intee le'eg ayaan ku aadaa Kuwait? Lacag intee le'eg ayaa ku jirta Kuwait? Hada [...]
14 xaqiiqooyin yaab leh oo xiiso leh oo ka yimid adduunka
Waxaan kugu casuumeynaa safar gaaban qaybaha ugu xiisaha badan adduunka. Eeg halka buundada ugu ballaadhan ee dunidu ku taal, dalkee ayaa ugu badan ee Ahraamta, intee in le'eg ayaa duulimaadka ugu gaaban ee dhexmara…. 1. Suudaan waxay leedahay pyramid ka badan kuwa Masar Suudaan waxay leedahay pyramid ka badan waddamada kale ee Dunida - xitaa in kabadan Masar. Waxa ku jira Ahraamyada 223 ee Suudaan ku yaal magaalooyinka Suudaan ee Al Kurru, Nuri, Gebel Barkal iyo Meroe. Waxay guud ahaan yihiin pyramids 20-30 mitir oo sarreeya oo leh dhinac tallaabo leh. 2. Wadamada leh lugta bidix Inkasta oo wadamada badankood ay leeyihiin taraafikada gacanta midig, in ku dhawaad ​​wadamada 50 wadooyinka taraafikada waa ka soo horjeedaan. Kuwaas waxaa ka mid ah Ingiriiska iyo dalalkii ay horey u ahaan jirtay gumeystihii Ingiriiska sida Australia, New Zealand, India marka laga reebo [...]
Sida loo helo fiisaha elektaroonigga ah ee Cumaan - fasaxa ku aada Cumaan
Sida loo helo fiisaha elektaroonigga ah ee Oman - fasaxa gudaha Cumaan Haddii aad qorsheynayso inaad fasax ku aado Cumaan, xusuusnow in wixii ka dambeeya Maarso 21, 2018, xeerar cusub ayaa lagu soo saaray Cumaan bixinta fiisooyinka dadka u imanaya dalkan quruxda badan. Ilaa hadda, fiisayaasha muddada gaaban ee Cumaan laga heli karo xudduudka, labadaba dhanka hawada iyo isgoysyada dhulka. Waxay qaadatay muddo gaaban isla markaana wax lug ah kuma lahayn wax dhibaato ah ama safka safka ah (ugu yaraan dhulkii ay la galeen Imaaraatka), waxay si xun ugu muuqatay garoonka diyaaradaha ee caasimada Cumaan. Thanks to this, dad badani waxay go'aansadeen inay qaadaan safarro maalmeedka 1-2 maalinlaha ah ee Cumaan intii ay joogeen Imaaraatka. Laga soo bilaabo 21 / 03 / 2018, waad iska ilaawi kartaa safarro isweydaarsi ah oo u socda Suldaanka reer Cumaan, iyo sidoo kale fiisooyinka laga soo saaray xadka. [...]
Kuweyt - waa wadan ka mid ah masaajidada 1000!
Kuweyt - waa wadan ka mid ah masaajidada 1000! Kuwait (APR) Fikrad iskeed ah usbuuc-dhamaad, safar deg-deg ah oo loogu tagayo Kuweyt, mahadi haysa hormarinta khadka Pegasus. Duulimaadyada ka imanaya Bergamo ilaa Kuwait City waxay ku kacayaan zNUMys 700. Safarka waxaan bilaabay jimcaha, waaberigii duullimaadyada May 8 duulimaadka Bergamo. Waan ka boodi doonaa arrinta faahfaahinta ku saabsan socodka Bergamo, maxaa yeelay macluumaadkan khaas ahaan maahan wax adag in laga helo akoonno kala duwan. Kadibna diyaaradda 14 ee ku socota Istanbul. On board Pegasus wax walba waa la bixiyaa, qiimaha caadiga ah - 4 Euro khamri, rooti - 4 iyo 5 Euro. Waxaan ku maqnaa 7 saacadood fasax Istanbul. Waxaan go aansaday inaan joojiyo kaliya degmada Kadikoy ee qaybta bari. Haddii aad isbeddel ku leedahay Sabiha Gokcen oo aan ku filnayn wakhti aad ku booqato qaybta xiisaha badan ee reer galbeedka [...]
Qatar - waa dal hodan ah, shirkado caalami ah, shidaal, jaranjarooyin, maaddooyinka qoyska boqortooyada, tusaale ahaan Qataryiinta ma bixiyaan canshuur. Waddan leh meel ka yar Sydney waxay xaq u leedahay inay abaabusho Koobka Adduunka - micno malahan inayna xiiseyneynin kubada cagta, madaama ay dhacdo in la fiiriyo wadan islaami ah, inaadan cabi karin aalkolo, in bisha kuleylka kulul ay ku dhaqmaan Suuragal ma ahan in la ciyaaro kubada cagta - xiiseyneyso ma ahan inay iska dhigaan, aalkolada ayaa dhibaato ku ah taageerayaasha kubada cagta, dib u soo nooleynta ayaa lagu rakibi doonaa garoomada - waa muhiim in lacag la helo. naf la’aan. Ma iibsan kartid qaab. Amniga waa mid lagu daro, maxaa yeelay waxay u badan tahay inay tahay meelaha ugu nabdoon dunida. aragtida - Naftayda ayaan u xaddiday [...]
Israa'iil iyo Falastiin 2020
Israa'iil iyo Falastiin ee 2020 Land Quduuska ah - ujeeddada xujaajta ee saddexda diimood ee adduunka weyn. Masiixiyada, Yuhuuda iyo Islaamka ayaa halkan ka dhashay. Haddii qof xiiseynayo taariikhda, diinta ama khilaafaadka siyaasadeed iyo casriga ee hadda jira, kama bixi doono Israel. Waxaan muddo dheer ku jiray liiska 'waa inaan arkaa', ugu dambayntiina waxaan u helay waqti. Waxaan kaxeeyey hooyaday si ay sidoo kale u fuliso mid ka mid ah riyooyinkeedii. Waxaan u qaatay Qudus sidii saldhigga, halkaas oo aan habeenkii oo dhan ku qaadaynay couchsurfer (martigelinta internetka ee socdaalka), taas oo aan ugu mahadcelinnay wadahadal fiidkii xiiso leh oo bilaash ah oo aan la yeelannay haweeney maxalli ah. Beddelka wararka gacanta ee xiisaha lihi, waxaan karinay casho. Israa'iil oo fiirinaysa - Yeruusaalem waa meel sixir leh, isku darka qaabab, da ', dad, xayraan wadooyin iyo mosaiki [...]